TNLA တိုက်ခိုက်မှု တပ်မတော် အကျအဆုံးရှိ၊ အရပ်သား ၇ ယောက် ဒဏ်ရာရ
TNLA တိုက်ခိုက်မှု တပ်မတော် အကျအဆုံးရှိ၊ အရပ်သား ၇...
9 ต.ค. 2562 - 20:20 น.
စစ်ကားကို RPG နဲ့ ပစ်ပြီး တိုက်ပွဲဖော်
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မနက် အစောပိုင်း ၆ နာရီခွဲနဲ့ ၆ နာရီ မိနစ် ၄ဝ ကြား၊ သိန္နီမှာ တပ်မတော်က လုံခြုံရေးနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ကား ၄ စင်းပါတဲ့ ယာဉ်တန်း တိုက်ခိုက်ရတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ပြောပါတယ်။
သန္နီမြို့တွင်းတိုက်ပွဲ ဖော်ဆောင်လာတဲ့ TNLA တပ်ဖွဲ့မှာ အင်အား အယောက် ၅ဝ ဝန်းကျင်ထိ ပါဝင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
TNLA တွေက လူနေအဆောက်အဦတွေကို အကာအကွယ်ယူ ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်၊ အဆောက်အဦတချို့ ပျက်စီးမှုတွေ ရှိခဲ့သလို အရပ်သား ထိခိုက် ဒဏ်ရာရတာတွေလည်း ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ပြောပါတယ်။
တိုက်ပွဲမှာ တပ်မတော် စစ်ကား ၂ စင်းကို ဖျက်စီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်း ဆိုထားပါတယ်။
မြို့လယ် လူနေအဆောက်အဦတွေ အနီးမှာ TNLA က တိုက်ပွဲဖော်တဲ့ အတွက် အရပ်သားတွေပါ ထိခိုက် ဒဏ်ရာရတာတွေ ဖြစ်နေရတယ်ဆိုပြီး သိန္နီ တိုက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ တပ်မတော်က တုံ့ပြန်ပါတယ်။
အခုလို မြို့လယ်ခေါင် တိုက်ပွဲဖော်တာဟာ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်အတွက် အကျိုးမဲစေတဲ့၊ အပေါင်းလက္ခဏာ မဆောင်တဲ့ လုပ်ရပ် အဖြစ်လည်း ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ပြောဆိုပါတယ်။
တအာင်း TNLA အပါအဝင် ညီနောင်မဟာမိတ် ၃ ဖွဲ့ အမည်အောင် စုစည်းထားတဲ့ လက်နက်ကိုင်တွေဟာ အပစ်ရပ်ကာလကို အခုနှစ် ၂ဝ၁၉ ကုန်ထိ တိုးမြှင့် ကြေညာထားပါတယ်။
อัลบั้มภาพ TNLA တိုက်ခိုက်မှု တပ်မတော် အကျအဆုံးရှိ၊ အရပ်သား ၇ ယောက် ဒဏ်ရာရ